Ikea ifumana kwi-Sonos iqabane elifanelekileyo lokuphucula umculo kunye nesandi ekhaya | IPhone iindaba
Ikea ifumana kwi-Sonos iqabane elifanelekileyo lokuphucula umculo kunye nesandi ekhaya
Kwaye ukuba i-Ikea mva nje ziindaba zezinto ezininzi kwaye phakathi kwabo ukufika kwesicelo esihambelana nenyani yokwenyani ukuze bakwazi ukubona ifanitshala egumbini, ukuhambelana kweebhalbhu zokukhanya kunye neKhayaKit kwaye ngoku ukubanakho xhobisa umculo kunye nesandi ekhaya kunye noSonos.
Izizwe ngezizwe zaseSweden ngoku zinesivumelwano esivaliweyo nesonos etafileni ukwenza umculo ube lula naphina ekhaya. Zombini ezi nkampani zicwangcisa ikamva lesandi emakhayeni kodwa zibone le projekthi ezivenkileni Kuya kufuneka ilinde de kube li-2019.
Iprojekthi ene-Sonos iphakathi kwe-Ikea Home Smart, Yiprojekti yasekhaya efanelekileyo, njengoko silumkisile ekuqaleni kweli nqaku, izinikele kwiimveliso ezingenazingcingo ukuhlawulisa iifowuni eziphathwayo okanye ii-bulbs zeTadfri. Konke oku kuye kwavela ukusukela nge-2105 kwaye ngoku kuya kugxila kwisandi ekhaya unyaka ukusukela ngoku.
UBjörn Block, uMlawuli weIkea Home Smart eSweden, ucacise amajelo eendaba ukuba umculo yinxalenye yabantu kwaye: “xa sibuza abanye abantu ukuba ziziphi izandi abazidibanisa namakhaya abo, uninzi luphendule lathi umculo yeyona nto ibenza bazive besekhaya Kungenxa yoko le nto bekholelwa ukuba ukongeza iimveliso ze-Sonos kunye nezabo kunokuba yimpumelelo enkulu. Kwelinye icala UPatrick Spence, u-CEO weSonos, Uye wathi isandi kufuneka sithathelwe ingqalelo njengezinto ezikhoyo ezindlini, kuyilo lwayo kwaye ke ukusebenzisana ne-Ikea ukwenza ezi mveliso zilungile kubo, kwi-Ikea kwaye ngaphezulu kwako konke kubathengi. Ngayiphi na imeko, amava ekhaya abalulekile kwaye i-Ikea yomelela ngezixhobo zolu hlobo inokuhambisa eli candelo lesandi sasekhaya ngakumbi.
Umendo opheleleyo kwinqaku: IPhone iindaba » iPhone » Ezahlukeneyo » Ikea ifumana kwi-Sonos iqabane elifanelekileyo lokuphucula umculo kunye nesandi ekhaya
Inkonzo yokusasaza umculo iTidal ngoku ixhasa iCarPlay
Idolophu yam: Ukugcina abantwana, imidlalo yabancinci yasimahla ixesha elilinganiselweyo